Call for Papers International Conference “Transformation Processes in Myanmar”
It is our pleasure to invite international and national scholars to the International Conference of University and National Development. The conference is jointly organized by the University of Yangon and the Centre of Excellence on Urban and Regional Development (University of Yangon) in collaboration with the University of Cologne, Germany, and the Geographical Association of Myanmar (GAM). It will take place at the University of Yangon on 16th December 2017.
Environmental Studies ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့သင်တန်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
၁။	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Environmental Studies ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာဘွဲ့ (၁)နှစ် သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။	အထက်ပါဒီပလိုမာဘွဲ့သင်တန်းကို အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
(က)	ြပည်ထောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။
(ခ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ြဖစ်ရမည်။
၃။	အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၅၃၄၃၉၀ တွင် ရုံးချိန် အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၄။	ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာနှင့် ကျောင်းဆောင်များဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် (၂၈-၁၁-၂၀၁၇) ရက်၊ (အင်္ဂါ) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရပါမည်။